Weerar Askar Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Wabiga Jubba. – Bogga Calamada.com
Weerar Askar Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Wabiga Jubba.
Ciidamo ka tirsan jamhadda Mujaahidiinta wilaayada Jubbooyinka waxay maanta weerar qorsheysan ku qaadeen maleeshiyaad ka tirsan maamulka Jubbaland oo ku socdaalayay wabiga Jubba ee hoos mara Jubbooyinka.
Dhaqdhaqaaqa maleeshiyaadka maamulka ashahaada la dirirka Jubbaland waxaa si dhow isha ugu hayay ciidamada wilaayada islaamiga ah ee Jubbooyinka kuwaas oo u qorsheeyay weerar si wayn loo agaasimay oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyay ciidamada dowladda.
Weerarka oo si gaara kaga dhacay inta u dhaxaysa deegaanka Yoontooy iyo tuulada Qoraxeey waxay Mujaahidiintu la beegsadeen dooni ay la socdeen maleeshiyaadka maamulka Jubbaland ilo muhiim ah waxay soo wariyeen in maleeshiyaadka ay doonayeen in doonida ay kaga tallaabaan dhinaca kale ee wabiga balse ay weerar kala kulmeen shabaabul Mujaahidiin.
Ilo wareedyo masuul ah waxay soo wariyeen in maleeshiyaadka maamulka ashahaada la dirirka ah ee Jubbaland gudaha wabiga lagula beegsaday dhowr garneel oo kuwa garabaha laga tuuro ah taas oo sababtay inay qalibanto doonida waxaana halkaas ku dhintay 3 askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka Jubbaland.
Waxay wararku intaas ku darayaan in ciidamada shabaabul Mujaahidiin weerarkaasi ku dhaawaceen 4 askari oo 2 ka mid ah maggacyadooda lagu sheegay Saadaq iyo Deeq-diiriye waxayna iluhu xuseen in dhaawacyada ciidamada dowladda loola cararay cisbitaallada magaalada kismaayo.